Mom and She – NOe
Category: Mom and She
“ထမင်းဟင်းချက်တာ ဘယ်ကတတ်လဲ?”လို့မေးရင်“အမေ့ဆီက တတ်တာ” လို့ဖြေရမယ်။(၅၀% နှုန်းပေါ့။)အမေဟာ သိပ်ကိုဟင်းချက်ကောင်းတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်တယ်။နောက်ပြီး ဘယ်ရာသီဥတုမှာ ဘာအစာကိုစားသင့်တယ် ၊ဘယ်အစားအစာကို ဘယ်လိုချက်ပြီး ဘာလေးနဲ့တွဲစားရင် ပိုလိုက်ဖက်တယ်၊(Nurse လည်းလုပ်ခဲ့တော့)ဘယ်အစားအစာမှာ ဘာအာဟာရဓာတ်တွေပါတယ် … ဆိုတာမျိုးတွေကအစ စစ်စစ်ပေါက်ပေါက် သိတဲ့အမျိုးသမီးပါ။ဥပမာ – ငနိုးတို့ ငယ်ငယ်က မိုးတွင်းရောက်ပြီဆို ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင်ဆိုပြီး ကြက်သွန်နီအစိမ်းတွေကျွေးတယ်။ဒီအတိုင်းဆိုမစားမှာစိုးလို့ သခွါးသီးကို ပါးပါးလှီး ၊ သံပုရာသီးလေးတွေညှစ်ပြီး ကြက်သွန်နီနဲ့သုပ်ကျွေးတာမျိုး။နောက်ပြီး ကြောင်လျာသီးတို့ ၊ ကြက်ဟင်းခါးသီးတို့လို အခါးတွေဆိုလည်း ငယ်ငယ်ကတည်းက စားကျင့်ရှိအောင် မျိုးစုံကို ချက်ကျွေးတာ။အစားစုံစားတော့ ငနိုးတို့ အိမ်မှာ ဘယ်သူမှ အားဆေးစွဲသောက်စရာမလိုဘူး။တော်ရုံလောက်ဆို ဖျားတာ ၊ နာတာလည်း သိပ်မဖြစ်ကြဘူး။နေမကောင်းဖြစ်လည်း အမေက အစားပဲဝင်အောင်ကျွေးတယ်။
အမေ့စကားနဲ့ပြောရရင် “ဆေးသောက်မယ့်ပိုက်ဆံကို အစားပဲစားလိုက်မယ်” ဆိုတာမျိုးပေါ့။အဲလို အမေနဲ့ကြီးပြင်းလာတာမို့ ငနိုးက ငယ်ငယ်ကတည်းက ချက်တာပြုတ်တာနဲ့သိပ်မစိမ်းဘူး။လူမှန်းသိတတ်စကတည်းက ကြက်သွန်ခွါ ၊ ငရုတ်သီးထောင်း ၊ ဟင်းရွက်သင်၊ ဆန်ဆေး ဘာညာတောက်တိုလောက်ကလုပ်တတ်နေပြီ။ကစားစရာထဲမှာလည်း အများဆုံးက အိုးပုတ်ပဲ။မြေအိုးပုတ်နဲ့ စဉ့်အိုးပုတ်လေးတွေ ပလက်စတစ်ခြင်းကြီးနဲ့ ၂ ခြင်းတောင်ရှိခဲ့တာ။မိမိ ၇ တန်းလောက်မှာ အမေက မိမိမသိအောင် သွားလွှင့်ပစ်လိုက်လို့ တော်တော် ငိုလိုက်ရသေးတယ်။
မှတ်မှတ်ရရ ၈တန်းမှာ (အမေဗိုက်ကြီးတော့ စိတ်ဆိုးနေတုန်း)အဖွားဆီက ပိုက်ဆံတောင်းပြီး ကိုယ်တိုင်စျေးဝယ် ချက်စားဖူးတယ်။(အဲဒီတုန်းက ငါးပြေမစားချင်လို့စျေးသွားဝယ်တာ စျေးသည်က တီလားဗီးယားကို ငါးပြေမပါဆိုပြီးလိမ်ရောင်းလိုက်တယ်။အိမ်ရောက်တော့ အဖွားက “ငါ့မြေးရယ် သမီးဟာက ငါးပြေမ မဟုတ်ဘူး။တီလားဗီယားကြီး” ဆိုလို့ ကိုယ်မှာ ဈေးသည်ကို ဒေါသတွေထွက်ပြီး မျက်ရည်စက်လက်နဲ့ ငါးဟင်းချက်စားခဲ့ရတာက အမှတ်တရပဲ
အသက်အရွယ်ရလာတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်လက်တည့်စမ်းပြီးချက်ကြည့်တယ်။ကောင်းတာလည်းရှိသလို ၊ မကောင်းတာလည်းရှိတယ်။YouTube က ဟင်းချက် Video တွေလိုက်ကြည့်တယ်။(Master Chef Myanmar တော့မကြည့်ဘူး
အဓိကကတော့ ဟင်းချက်ရင် ခေါင်းသုံးပြီး နှလုံးသားနဲ့ချက်တာပဲ။
မိမိအတွက်တော့ ဟင်းချက်ခြင်းဟာ “ကမ္ဘာဦးကတည်းက လူသားတွေနဲ့အတူဖြစ်တည်လာခဲ့တဲ့ အနုပညာတစ်ရပ်” လို့ခံယူထားတယ်။အမေကလည်း ပြောဖူးတယ်။“လူတိုင်း ဟင်းချက်တတ်ကြတယ်။”တဲ့။ဒါပေမယ့် မိမိကိုတော့“ထမင်းဟင်းချက်တာ ဘယ်ကတတ်လဲ?”လို့မေးရင်“အမေ့ဆီက တတ်တာ” လို့ဖြေရမယ်။
Posted in Food, Mom and SheLeaveacomment
မိဘတွေအတွက် သမီးကောင်းတစ်ယောက်မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ဖြစ်အောင်လည်း တစ်ခါမှ မကြိုးစားခဲ့ဘူး။( သေအောင် ကြိုးစားလည်း ဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်မှန်းသိလို့ )
အစ်မကောင်းတစ်ယောက်လည်းမဟုတ်ခဲ့ဘူး။“ အကြီးဖြစ်ပါစေ “ဆိုပြီး ကိုယ်ရွေးချယ်ခဲ့တာမဟုတ်လို့ အငယ်တွေကိုလည်း မညှာချင်ဘူး။ညှာလည်းမညှာခဲ့ဘူး။ညှာရမယ့်တာဝန်လည်း မရှိဘူးလို့ ခံယူတယ်။(ရက်သားကလေးလေးကို ဗိုက်တက်နင်းရတာနဲ့ ၊ အလယ်တန်းအရွယ်လေးကို ကုတင်ပေါ်က ကန်ချရတာနဲ့ …. )
အိမ်ထောင်ကျတယ်။ဇနီးကောင်းတို့ ၊ မယားအလိမ္မာလေးတို့ ဂုဏ်ပုဒ်တွေ မမက်ဘူး။ဂရုလည်းမစိုက်ဘူး။အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ ကိုယ့်ဝတ္တရားမပျက်အောင်နေတယ်။ ဒီလောက်ပဲ။အဲ … အမေ ကောင်းတော့ဖြစ်ချင်မိသား။ရွေးချယ်ခွင့်မရဘဲ ကိုယ့်သားသမီးဖြစ်လာကြမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေကို ကိုယ့်ကြောင့်တော့ စိတ်မညစ်စေချင်ဘူး။မျက်နှာမပျက်စေချင်ဘူး။အားမငယ်စေချင်ဘူး။တစ်ခါတစ်လေ အချို့ကိစ္စတွေမှာ ဦးနှောက်နဲ့ စိတ်ဆန္ဒလွန်ဆွဲပြီး ဝေခွဲမရဖြစ်တဲ့အခါ “မိမိလုပ်ရပ်တွေဟာ မိမိသားသမီးဖြစ်လာမယ့် ကလေးတွေအပေါ်မှာ ဘယ်လိုသက်ရောက်နိုင်မလဲ” ဆိုတာအမြဲတွေးပြီး ဆင်ခြင်သုံးသပ် ဆုံးဖြတ်တာ အကျင့်တောင်ဖြစ်နေပြီ။“သူတို့အမေက ….” ဆိုတဲ့အနောက်မှာဆက်ပါလာမယ့်ဝေါဟာရတွေဟာ သူတို့အတွက်နာကျင်စရာမဖြစ်စေချင်ဘူး။အမှန်အတိုင်း ဝန်ခံရရင် ဒါဟာ မိမိအတွက်တော့ မိဘမေတ္တာမဟုတ်ဘူး။ချစ်ခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူး။မိမိရဲ့ အတ္တ မူကွဲတစ်ခုပဲ။ကိုယ်ကမွေးမှ လူဖြစ်လာမယ့် သူတွေရဲ့ဘဝမှာ ကိုယ်ဟာ အမည်းစက်မဖြစ်လို ….
Posted in Mom and She, NOeLeaveacomment
နောက်လဆို ဘွဲ့ယူရမယ်။ ဘွဲ့နှင်းသဘင် တက်ဖြစ် မတက်ဖြစ်ကတော့မသေချာသေးဘူး။
ရှေ့က ၂ ဘွဲ့လည်းလိုက်ပေးခဲ့တာမှမဟုတ်တာ။
အေးပေါ့… နိုင်ငံခြားကရတဲ့ဘွဲ့မှ ဘွဲ့ထင်နေတဲ့ ၊ နိုင်ငံခြားမှာ သင်မှ ပညာတတ်တယ်ထင်နေတဲ့ လူတန်းစားတစ်ရပ်ထဲ အမေဟာ ထိပ်ဆုံးကပဲဟာ။
ကိုယ်တွေဆိုသည်မှာလည်း ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ တက္ကသိုလ်အချို့ကလွဲရင် ဘယ်နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်တွေကိုမှ အထူးတလည် စိတ်ဝင်စားအထင်ကြီးနေတဲ့အထဲမပါဝင်။
စိတ်ဝင်စားတဲ့တက္ကသိုလ်တွေကျပြန်တော့လည်း လောလောဆယ် ကိုယ့်အနေအထားနဲ့ဆို အနားတောင်မကပ်နိုင်သေး။
အမေအထင်ကြီးတဲ့ နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်မှာကျောင်းပြီးတဲ့ကောင်ဖြစ်ပြီးရောဆိုပြီး နိုင်ငံခြားက So Called တက္ကသိုလ် တောကျောင်း တောင်ကျောင်းတွေ မှာ အဆင့် ခပ်နိမ့်နိမ့်နဲ့အောင် ၊ ခနော်နီ ခနော်နဲ့ So Called ဘွဲ့လက်မှတ်လေးကိုင်ပြီး ခပ်တည်တည်နဲ့ ပြန်လာရအောင်လည်း ကိုယ်တွေက အဲ့လောက်ထိ မျက်နှာမပြောင်တတ်။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်လောက်က ရတဲ့ ဂျပန်ပညာတော်သင်ကို မသွားဘဲနေလိုက်တာ အဲဒါတွေကြောင့်ပဲ။
I want to be Myself…
စိတ်မပါရင် ရေတောင်ထမသောက်တတ်သူမို့ လူအထင်ကြီးခံရဖို့ ပညာသင်တယ်ဆိုတာကတော့ ဝေလာဝေးပါ။
ဘဝက Frozen ထဲက Let it Go လိုပဲ။
Conceal, don’t feel, don’t let them know”ပေါ့
အခုတော့ “Well, now they know” မို့ “Let it go” ပဲ။
Mommy’s Good Girl ဖြစ်ဖို့ထက် ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်လုံနေဖို့ပဲလိုတယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။
အခုအချိန်ထိ တက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းတွေ သင်ခဲ့တဲ့ပညာတွေထဲမှာ အဝေးသင်တစ်ခုကလွဲရင် ကျန်တာတွေအကုန်ဟာ ကိုယ်တကယ်စိတ်ဝင်တစားနဲ့ စိတ်ပါဝင်စားတာတွေချည်းပဲ။
မင်္ဂလာပွဲပြီးရင် ကျောင်း ၂ နှစ်နားမယ် စိတ်ကူးတယ်။ ၂နှစ်ပြည့်ရင် ဟိမဝန္တာဘက်ကို ခရီးရှည်ထွက်မယ်။
ပြန်လာရင် မာစတာတစ်ခုလုပ်မယ်။ ဘာနဲ့ပတ်သတ်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုတာတော့ အခုလောလောဆယ်မှာ မပြောနိုင်သေး။ အဲဒီအချိန်မှာ စိတ်ပါရာကို လုပ်မယ်။
မာစတာလုပ်ရင်းနဲ့ ကလေးယူရင်လည်းယူဖြစ်မယ်။ သူများတွေကတော့ မဖြစ်နိုင်လောက်ဘူး ပြောနေကြလွန်းလို့ လက်တည့်စမ်းချင်တာလည်းဖြစ်မယ်။ မသိသေးဘူး။
Posted in Mom and SheLeaveacomment
မနေ့ညက ၃ နာရီခွဲမှ အိပ်ပျော်သွားလို့ ဒီမနက်အိပ်ရေးဝဝအိပ်မယ်တွေးထားပေမယ့် စောစောထလိုက်ရတယ်။
ကိုယ့်တာဝန်က အလှူငွေလာကောက်ရင်ထည့်ဖို့ကလွဲ အခြားမရှိ။
သန်းခေါင်စာရင်းအရသာ မိသားစုစာရင်းဝင်နေပေမယ့် ဘေးထွက်ထိုင်နေခဲ့ရတာကြာပြီကို။😁
ဒါပေမယ့် အဖွားက အလှူလုပ်မယ့် ဘုန်းကြီးကျောင်းပို့ပေးပါဆိုလို့ အိမ်ယာကနေ ကဗျာကယာထပြီး ရေမိုးချိုးသွားပို့ပေးလိုက်တယ်။
တကယ့်တော့ အဲလိုလူများတဲ့ အလှူတွေ သိပ်မသွားချင်လှ။
ဘုရားရိပ်တရားရိပ်မှာ ရွှေတွဲလွဲ ငွေတွဲလွဲ ပြောင်ပြောင်ရောင်ရောင်တွေ မြင်ရင် အူယားလာတတ်တာလည်းပါတယ်။😂
ပိတ်ထားတာနဲ့ဘေးနားက ပရိဘောကအလုပ်ရုံမှာ ကျွန်းကုတင်နဲ့ ကျွန်းစားပွဲသွားကြည့်ပြီးပြန်ခဲ့တယ်။
မယဉ်လှကိုသွားခေါ်ပြီး ရုံးခန်းအသစ်နဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးရင်နေမယ့်အခန်းကိုသွားရှင်းတယ်။
ဒါပေမယ့် “ဒါ ငါနေရမယ့် ငါ့အပိုင်နေရာလေးပါလား” ဆိုတဲ့အသိလေးကတော်တော် ပီတိဖြစ်ရတယ်။
နေ့လယ်ကျတော့ အဖွားက လာကြိုဖို့လှမ်းခေါ်တာနဲ့ မနက်ကဘုန်းကြီးကျောင်းပြန်သွားရပြန်ရော။
အခန်းရှင်းလက်စနဲ့မို့တော်တော် ပုံစံကစုတ်ပြတ်သတ်နေပေမယ့် အဖွားကိုအကြာကြီးမစောင့်စေချင်လို့ အဝတ်လဲမနေတော့ဘဲထွက်လာခဲ့တယ်။
ဆေးဆိုးပန်းရိုက်လူတွေကြားမှာ ထုံးစံအတိုင်း ကိုယ်တွေဟာ သင်းကွဲ 😂
အမေမဟုတ်တဲ့ အခြားသူတွေက ထမင်းဝင်စားဖို့လှမ်းခေါ်ကြပေမယ့် (ကံကောင်းတယ်ပြောရမယ်) သက်သတ်လွတ်မရှိလို့ဝင်မစားဖြစ်ခဲ့ဘူး။
ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ နေရာတစ်ခုမှာ ထမင်းစားဖို့မဆိုနဲ့ ။
ညနေရောက်တော့ လူကြီးတွေကိုကန်တော့ဖို့ဆိုပြီးလှမ်ရခေါ်လို့ အိမ်ရှင်းလက်စနဲ့ပဲထွက်ခဲ့ရပြန်တယ်။
တကယ်တော့ ကန်တော့တယ်ဆိုတာကို အယုံအကြည်မရှိတာကြာပြီ။
နောက်ပြီးကိုယ်ဘာအမှားမှမလုပ်ထားသည့်တိုင် ကာယကံ ၊ ဝစီကံ ဘာညာသာရကာ ဘလာဘလာနဲ့ ဝန်ချတောင်းပန်ကန်တော့ လည်း ဘယ်တော့မှ ခွင့်လွှတ်ပေးမှာမဟုတ်တဲ့ အမေ့ကို ကန်တော့နေတော့ရော ဘာထူးမှာမို့လဲ?
အမေ မက်လောက်စရာကောင်းလောက်တဲ့ ငွေထုပ်ကြီးနဲ့ကန်တော့တယ်ဆိုရင်တော့လည်းတစ်မျိုးပေါ့။😂
လူတွေကသာ အမျိုးမျိုးထင်ကြေးတွေပေးနေကြတာ။တကယ်တမ်းအမေနဲ့ကိုယ့်ကြား ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မှာက ပိုက်ဆံပဲ။
ဘာလို့ဒီလိုပြောရတာလဲဆိုတာ တစ်နေ့တော့ အခြားသူတွေ နားလည်လာပါလိမ့်မယ်။
Most of the people say “When no one believes in you,there will be your mom still supporting you.”
But for me , even everybody would believe in me and is supporting me, mom is sure for not believing in and supporting me.
I haven’t got any appreciation from my mom since my childhood although I have been trying hard for my entire life.
When even I passed matriculation exam with flying colors , she didn’t dare to attend my prize-giving ceremony.
Actually, I had to go all prize-giving ceremonies alone since I was 12 years old as she denied all invitations from schools as well as other organizations.
She also denied to attend my convocation when I was graduated.
It’s so sad but true.
I can’t understand why she treats me such.
When I was kid , I used to be so smart and outstanding student.
I got too many metals.
I have never failed any exam in my student life.
After high school , I worked for my family instead of going university at 16 years old.
I used to beaATM for family.
I started my own business at 19 years old.
Although being known as an Entrepreneur , Woman in Tech , Public Speaker and with so many other titles by other people , I’m justablack sheep for mom.
Anyway, I keep trying to achieve my goals of life.
Whether she accepts me or not , I’m still her kid.
Even being the person you hate most ,I love you mom.
တစ်အိမ်တည်းနေပြီး မျက်နှာချင်းဆိုင်လို့မရတဲ့ မိသားစုဝင်တွေကြားမှာ
လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ လောက်ကနေခဲ့တဲ့ အိမ်လေးကိုပြန်သွားကြည့်မိတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့က အရှေ့ဒဂုံကတိုက်ခန်းကို သွားကြည့်ပြီးအပြန်မှာ ငယ်ငယ်တုန်းကနေခဲ့တဲ့အိမ်လေးကို လမ်းကြုံလို့ ဝင်ကြည့်မိတယ်။
အသက် ရ နှစ် ၊ နှစ်တန်းကျောင်းသူ အရွယ်မှာ နေခဲ့ရတဲ့ ဒီအိမ်လေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အမှတ်ရစရာတွေကအများကြီးပဲ။
ဒီအိမ်လေးကို ပြောင်းတော့ အလုပ်သမားတွေမငှားဘဲ နိုးရဲ့ ဦးလေးတွေနဲ့ပဲပြောင်းခဲ့ကြတာ။
(အရင်နေတဲ့ တစ်ထပ်အိမ်လေးက ဒီအိမ်လေးနဲ့ တစ်လမ်းကျော်။နောက်မှပဲ အဲဒီအိမ်လေးကိုသွားကြည့်ဦးမယ်။ အဲဒီနေ့ကမိုးချုပ်နေပြီမို့)
အဲဒီတုန်းက အိမ်လခက တစ်လကို ၂၅၀၀ လား ၊ ၃၀၀၀ လားမမှတ်မိတော့ဘူး။
အိမ်ဝယ်ဖို့လုပ်ထားတဲ့ ငွေတွေ လူလိမ်ခံရပြီး နောက် ပြောင်းနေခဲ့တဲ့အိမ်လေးပေါ့။
အိမ်က သစ်သားနှစ်ထပ်အိမ်ကြီးဆိုပေမယ့် အောက်ထပ်မှာ ရှေ့ဘက်ခြမ်းက ခြေတံရှည် ၊ အနောက်ဘက်ခြမ်းတစ်ဝက်ကပဲ အကာအရံနဲ့ပေါ့။
မိုးရာသီဆို ခြံထဲမှာရေတွေပြည့်တော့ ဦးလေးတွေက ယင်ကောင်တွေသတ် ၊ ငါးစာလုပ်ပြီး နိုးကို ငါးမျှားသင်ပေးဖူးတယ်။
နေ့လည်ဘက်တစ်ယောက်တည်း ခြံထဲမှာ သြဇာစေ့ဆော့ဖို့ တွင်းတူးနေတုန်း ဘေးခြံက ကုလားကြီးမွေးထားတဲ့ကြက်ဖက ငယ်ထိပ်လာဆိတ်တာခံဖူးတယ်။
နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်တွေဆို အောက်ထပ်မှာ တစ်ယောက်တည်း အဖြူ အမဲ TV လေးနဲ့ Family Game တစ်ညလုံးထိုင်ဆော့ဖူးတယ်။
ဆောင်းတွင်းတွေဆို ခြံထဲဆင်း ၊ အမှိုက်တွေမီးထိုင်ရိ်ှု့ရင်း မီးပုံကြီးဘေး အမေခွံတဲ့ထမင်းကို အပူအပင်ကင်းကင်းထိုင်စားဖူးခဲ့တယ်။
ခြံထဲမှာ ချဉ်ပေါင်ပင်တွေရှိတယ် ၊ နောက်ဖေးမှာ ဘူးစင်ရှိတယ် ။ ဘူးစင်အောက်မှာ ကန်စွနး်ခင်းရှိတယ်။
အိမ်ရှေ့မှာ ရှမ်းပြည်က သယ်လာတဲ့ နှင်းဆီပင်တွေရှိတယ်။ (ညဘက်တွေဆို သူခိုးခိုးမှာကြောက်လို့ အိမ်ခါနီးတိုင်း အဲဒီနှင်းဆီးပင်တွေကို အိမ်ထဲရွေ့အိပ်ရတယ်။)
ခြံဘေးက လမ်းကိုပြင်ပြီး ကတ္တရာလောင်းတော့ ကတ္တရာစေးကျိုတာသွားကြည့်မိလို့ အမေ့ဆီမှာ အဆူခံရဖူးတယ်။
သီတင်းကျွတ်ဆို တရုတ်တန်းက ဝယ်လာတဲ့ မီးရှုးမီးပန်း ၊ ဗောက်အိုးပေါကင်လိုက်တွေကို ၊ လမ်းထဲကတခြားကလေးတွေပါခေါ်ပြီး ခြံထဲမှာ အတူတူဆော့ခဲ့ဖူးတယ်။
၇ နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့က အဲဒီအိမ်အပေါ်ထပ်မှာ ဦးလေးတွေက ကိတ်မုန့်လေးဝယ်ပြီး မွေးနေ့လုပ်ပေးတယ်။
အိမ်ရှေ့အိမ်က ကလေးအဖေ ဦးလေးကြီးကို သူ့မယားငယ် ရပ်ကွက်ထဲလာဆဲတော့ အိမ်ရှေ့ဝရံတာလေးကနေ တိတ်တိတ်လေးချောင်းကြည့်ဖူးတယ်။
ခြံရဲ့ဘေးလမ်းတစ်ဖက်ခြမ်းအိမ်စုတ်လေးက နတ်ကတော်အခြောက်ကြီးရဲ့ အမေ အဖွားကြီးရောင်းတဲ့ ဗယာကြော်ဟာ ဘဝရဲ့ ပထမဆုံးစားခဲ့ဖူးသော ဗယာကြော်ပဲ။
အိမ်နားက ကွမ်းယာသည်ဦးလေးကြီးသမီး ၊ ရွယ်တူကောင်မလေးလို ကွမ်းယာဆိုင်လေးထဲမှာ မှန်အိမ်လေးနဲ့စာကျက်ကြည့်ချင်ခဲ့ဖူးတယ်။
အဲဒီအိမ်ကနေ တာမွေကိုပြောင်းတော့ ပန်းပင်တွေကို ဘေးအိမ်တွေကို လက်ဆောင်ပေးခဲ့ရတယ်။
တက်ခဲ့တဲ့ အ.မ.က (၁) က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ခွဲခဲ့ရတယ်။
တာမွေတိုက်ခန်းမှာ ပြေးလွှာ ၊ ခုန်ပေါက်မိလို့ အောက်ထပ်ကလာတိုင်တိုင်း အဲဒီအိမ်လေးကို လွမ်းခဲ့ရတယ်။
တာမွေကကျောင်းသစ်မှာ အသားမကျမချင်း ကျောင်းဟောင်းက အပေါင်းအပါတွေအကြောင်းကို တွေးပြီး ဝမ်းနည်းခဲ့ရတယ်။
ကြာတော့ လည်း အသားကျသွားတာပါပဲ။
အခုပြန်သွားကြည့်တော ့အိမ်လေးက အိုနေပြီ။ပြိုနေပြီ။
ဘေးက ခြံက ကုလားကြီးမိသားစုလည်းမရှိတော့ဘူး။
မီးရှုးမီးပန်းအတူဆော့ခဲ့တဲ့ လမ်းထဲက ကလေးတွေလည်း အိမ်ထောင်တွေတောင်ကျနေလောက်ရောပေါ့။
လက်ရှိနေကြတဲ့ မိသားစုကိုဆင်းပြီး နှှုတ်ဆက်တော့ သူတို့လည်းငှားနေကြတာတဲ့။
ငွေရေးကြေးရေး သိပ် အဆင်ပြေပုံမပေါက်တဲ့ အဲဒီမိသားစုလေးဟာ အမိုးအကာမလုံတော့တဲ့ ဒီအိမ်လေးမှာ နေရေး ထိုင်ရေး ရော အဆင်ပြေကြပါ့မလား။
ပြန်ခါနီးနှုတ်ဆက်တော့ ကလေးလေးတစ်ယောက် တာ့တာ ထွက်ပြတယ်။
နောက် အနှစ် ၂၀ ကျော်ကြာတဲ့အခါ ဒီကလေးလည်း ကိုယ့်လိုပဲ ဒီအိမ်လေးမှာနေခဲ့ရတဲ့ ဘဝထက် မြင့်မားတိုးတက်သွားတဲ့ ဘဝအခြေအနေတစ်ခုနဲ့ ဒီအိမ်လေးကို ပြန်လာကြည့်နိုင်ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ………………………………………………….
စကားမစပ် ကျုပ်ရဲ့ အမေဘက်က မျိုးနဲ့ရိုးနဲ့ကို အစဉ်အဆက် စွန့်ဦးတီထွင်တွေဗျ။
ခပ်ကြွားကြွားလေးပြောရရင်တော့ဗျာ ကျုပ်က စွန့်ဦးတီထွင် မျိုးရိုးရဲ့ အရိုက်အရာကို ဆက်ခံရမယ့် သူပေါ့။
သူ့အသက်ကလေး ၂၀ ကျော်မှာ သားသမီးတွေကို ရန်ကုန်မှာကျောင်းထားမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ သူ့ခေတ်သူ့အခါက မိန်းကလေးတိုင်းအားကျဖြစ်ချင်ခဲ့ရတဲ့ သူနာပြုဝန်ထမ်းဘဝကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်မြို့ှုကြီးကို မိသားစုလိုက်ပြောင်းခဲ့တယ်။
ရန်ကုန်-စစ်တွေ ကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ နယ်မြို့လေးတစ်မြို့က အသက် ၂၀ ကျော်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေမှာ အသိိုင်းအဝိုင်း ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ဝေဖန်မှု ၊ တားဆီးမှုတွေတော်တေ်ာလေးရှိခဲ့တာပါ။အဲဒီခေတ်က ဒီလိုအတွေးအခေါ်မျိုးနဲ့ ဒီလောက်ထိစွန့်စားဖို့ဆိုတာက တော်ရုံသတ္တိနဲ့တော့မရဘူးလေနော်။သူများတွေလို စီးပွားရှာဖို့ မဟုတ်ဘဲ သားသမီးပညာရေးအတွက် ရန်ကုန်ထိမိသားစုလိုက်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာ ဒီနယ်မြို့လေးမှာ တော်တေ်ာလေးကို ဆန်းသစ်ပြီး ထူးခြား ဦးဖျားနေတဲ့ idea တစ်ခုပါ။
ရန်ကုန်ရောက်လာပြန်တော့လည်း သားသမီးတွေကို သူသူငါငါလို လူတန်းစေ့ ကျောင်းထားတယ်ဆိုရုံမဟုတ်ဘဲ နွေရာသီ အင်္ဂလိပ်ကျောင်း ၊ အနုပညာကျောင်း ၊ ဘင်ခရာ စတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေလည်း ရအောင် သူလက်လှမ်းမီသလောက် တီထွင် ကြံဆခဲ့ရပါသေးတယ်။
သူ ဒီလိုကြိုးစားပြီး အားထုတ်ခဲ့ရတဲ့ သူ့ရဲ့ Product ဖြစ်တဲ့ ကျုပ်ကလည်း အထိုက်အလျောက်တစ်ခုရောက် ခရီးပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ အခုဆိုရင် ဘာပဲပြောပြော ကျုပ်တို့နယ်မြို့လေး မိဘတွေဟာ သားသမီး ပညာရေးနဲ့ ပတ်သတ်ရင် ကျုပ်အမေကိုလာလာပြီး အနည်းနဲ့အများတော့ အလေးထားဆွေးနွေးတိုင်ပင်လာကြတာတွေရှိလာပါတယ်။
ကျုပ်အမေရဲ့ အဖေ၊ ကျုပ် အဖိုးဆိုရင်သူ့ခေတ်သူ့အခါ က သူ့နယ်မှာဆို တကယ်ကို စွန့်ဦးတီထွင်စစ်စစ်ကြီးပါ။
စျေးမရှိတဲ့ မြို့မှာ စျေးရအောင်တည်ခဲ့ ပြီး နယ်ခံကုန်သည်လူတန်းစားတစ်ရပ်ကိုပေါ်ပေါက်စေခဲ့သူ ၊ အထက်တန်းကျောင်းမရှိတဲ့မြို့မှာ အထက်တန်းကျောင်းရအောင်ဆောက်ခဲ့တဲ့သူ ၊လမ်းတွေဖောက်ခဲ့တဲ့သူ ၊တံတားတွေဆောက်ခဲ့တဲ့သူ ၊ရင်ကွဲသရက်သီး ၊ လက်ဖက် စတဲ့ အစားအစာတွေကို နယ်ခံတွေစားတတ်လာအောင် သင်ပေးခဲ့တဲ့သူ ဆက်ပြောရင်တော့ ဇာတ်လမ်းရှည်ကြီးမို့ ဒီလောက်နဲ့ တော်သေးပြီ။
ကျုပ်အဖိုးရဲ့ အဖေ ၊ ကျုပ်အဘိုးဆို ……………. တော်ပါပြီ ဆက်မပြောတော့ပါဘူး။ နိုင်ငံရေးတွေပါလာမှာစိုးလို့။
ဆိုလိုတာက လက်ရှိ ငနိုးသည် သူတိုနဲ့ယှဉ်ကြည့်ရင် သေးသေးလေးမှ တကယ့်သေးသေးလေး။
(တဖြေးဖြေးတိုးပွားကြီးမားလာတဲ့ တာဝန်တွေကြောင့် ဘဝင်မြင့်ချင်သလိုလိုဖြစ်နေ၍ နိဝါတောစ ဖြစ်အောင် ပြန်လည် ဆင်ခြင်မိခြင်းများ)
မနေ့ကမနက် ရေကူးပြီးပြန်လာတော့ အိမ်တံခါးခေါက်တာ တော်ရုံနဲ့ လာမဖွင့်လို့ စိတ်တိုလာတာနဲ့ အတွင်းတံခါးကို အားနဲ့ဆောင့်ဖွင့်လိုက်တော့ ဘုရားရှိခိုးရာကတံခါးဖွင့်ဖို့ ထ လာတဲ့ အမေ့ကိုလှမ်းတွေ့လိုက်တယ်။ အမေအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူး။ ကြမ်းပြင်ကိုလက်ထောက်ပြီး ထ ရ တဲ့ အရွယ်တောင်ရောက်လာပြီ။
ညဘက်အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အိမ်ရှေ့ဆက်တီမှာ မှေးနေနဲ့ အမေ့ကို သတိထားကြည့်မိတယ်။ အမေ့ နဖူးက ဆံစတွေ တော်တော် ဖြူနေပြီ။
ဒီနေ့ လည်း သွားကိုက်နေတယ်တဲ့။ ဆေးခန်းသွားမယ်ဆိုတော့ မသွားချင်ဘူးတဲ့။အမေနဲ့နေ့လည်စာအတူစားရင်း “တခြားနေ့တွေဆို သူတစ်ယောက်တည်း ထမင်းစားရမှာပဲ”ဆိုပြီး တွေးမိလို့ ရင်ထဲမှာ ဆို့တက်လာတယ်။ သူ့ကြည့်ပြီး ဘာပြောလို့ပြောရမှန်းလည်း မသိတော့ဘူး။အမေတော်တော် အသက်ကြီးလာပါလား လို့ သတိထားမိတဲ့ မနေ့က စလို့ စိတ်ထဲမှာနေရတာတစ်မျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်။ ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမှန်းလည်းမသိဘူး။အလုပ်တွေကလည်း ရှိနေသေးတော့ အခုလောလောဆယ် လူက ရုံးမှာရောက်နေတယ်။ စိတ်ကတော့ အိမ်မှာ။ ညနေကျရင်တော့ အိမ်စောစောပြန်ချင်တယ်။